विचित्र संसार Archives - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com विचित्र संसार Archives - खबर प्रवाह
तपाईंले ससारमा रहेका अनेकथरी रेष्टुरेन्टका बारेमा सुन्नुभएको होला । कहीँ जेलजस्तै गरी बनाइएका रेष्टुरेन्ट त कहीँ रुखमा बनेका रेष्टुरेन्ट । पानीमुनि पनि रेष्टुरेन्ट बनाइएका छन् । यस्तै विचित्र रेष्टुरेन्टहरु मध्ये एउटा अर्को रेष्टुरेन्ट पनि छ, जहाँ बोल्न पाइँदैन । उक्त रेष्टुरेन्टमा खानाको स्वाद लिनका लािग छिर्ने पाहुनाहरुले इशाराले नै खाना अर्डर गर्नुपर्दछ । बोल्ने छुट […]
पछिल्लो समय विश्वको एउटा घटनाले सोसल मिडिया तताएको छ । महिला अधिकारकर्मीहरु यसलाई घृणित तथा सेक्सिस्ट कार्य भन्दै आलोचना गरिरहेको छन् । आखिर सोसल मिडियामा तहल्का मच्चाउने यो काण्ड के हो त ? वास्तवमा रुसमा भएको स्कर्ट काण्ड अहिले चर्चामा छ । रुसको एउटा कम्पनीले महिला कर्मचारीलाई स्कर्ट लगाएर अफिस आउन प्रोत्साहित गर्दै पुरस्कारको घोषणा […]
अहिले युट्युबरहरुको बाढी नै लागेको छ । आफ्नो भिडियोलाई भाइरल बनाउन तथा युट्युब च्यानलबाट पैसा कमाउन लागि युट्युबरहरुले अनेक खालका हर्कत गरेर भिडियो अपलोड गर्ने गर्दछन् । यस्तैमा एकजना युट्युबरले बिस्कुटमा क्रिमको साटो दाँत माझ्ने पेष्ट राखेर एकजना घरबारविहीन मानिसलाई खान दिए । यस्तो अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा ती युट्युबरमाथि १५ महिनाको सजाय भएको छ […]
नयाँ आइफोनका लागि एप्पलले ल्याउँदैछ आइओएस १३
एप्पलले आइफोेन तथा आइप्याडका लागि नयाँ संस्करणको अपरेटिंग सिस्टम लञ्च गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो वार्षिक वल्र्डवाइड डेभलपर्स कन्फ्रेन्स (डब्लुडब्लुडिसी २०१९) मा का क्रममा यसको घोषणा गरेको हो । यसक्रममा एप्पलले आफ्नो आइप्याण्डका लागि छुट्टै अपरेटिंग सिस्टमको घोषणा गरेको छ । जसको नाम आइप्याड ओएस रहेका छ । एप्पलका अनुसार अब आइप्याडमा आइओएस १३ का […]
अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित फेसबुकको कार्यालय बाहिर सयौं महिलाहरुले निर्वस्त्र भएर प्रदर्शन गरका छन् । महिलाहरुप्रति फेसबुकले कठोर नियम अख्तियार गरेको भन्दै सेन्सरसिप विरुद्धको राष्ट्रिय गठबन्धनले कलाकार स्पेन्सर ट्युनिकको साथमा उक्त नग्न प्रदर्शनको आयोजना गरेको हो । विरोध प्रदर्शनका क्रममा मानिसहरु नग्न भएर फेसबुक कार्यालय अगाडिको सडकमा सुतेका थिए र हातमा वक्षस्थलको प्रतिरुप बोकेका थिए । फेसबुकले […]
जहाँ जागिर पाउन परीक्षा होइन, कफी पिउनु पर्दछ
जागिर खाने बेला लिखित तथा मौखिक परीक्षाको सामना त गर्नुभएकै होला । परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता भनेपछि मनमा डर उत्पन्न हुन्छ । तर यो दुनियाँमा एउटा यस्तो कम्पनी छ जहाँ जागिर खानका लागि परीक्षा दिनुपर्दैन । कफी पिउने कुरामा अब्बल ठहरिए पुग्दछ । अष्ट्रेलियाको एक अकाउटिंग सफ्टवेयर कम्पनी Xero ले यस्तो अनौठो खालको कफी परीक्षा लिन्छ […]
‘मर्द’को अनुहारवाला पर्स भयो भाइरल
काठमाडौं । अहिलेको आधुनिकताको दौडमा नयाँ नयाँ चिजको विकास भैरहेको छ । हरेक दिन बजारमा केही नयाँ चिज आउँदछ । कतिपय चिजहरु निकै सुन्दर लाग्छन् त कतिपय यस्ता अनौठा हुन्छन् कि देख्दैमा हाँसो उठ्दछ । के तपाईले पुरुषको दाह्रीयुक्त अनुहार जस्तै आकारको पर्स देख्नुभएको छ ? अहिले सोसल मिडियामा यस्तै पर्स भाइरल बनिरहेका छ । […]
फोन उठाउने बित्तिकै पहिलो शव्द हुन्छ : हेल्लो । त्यसपछि मात्र फोन गर्ने मानिससँग बाँकी कुराकानी हुन्छ । आखिर फोनमा किन र कसरी हेल्लो भन्ने चलन आयो होला ? यो सबैको चासोको विषय हुन सक्दछ । यस विषयमा अनेक प्रकारका दाबीहरु छन् । तर त्यसमध्ये एउटा भरपर्दो तथ्य चाहिँ यस्तो छ । टेलिफोनका आविष्कारक हुन् […]
काठमाडौं । अस्पतालमा काम गर्ने नर्सको जिम्मेवारी हुन्छ, विरामीको सेवा गर्ने । बिरामी छिटो निको गराउनमा नर्सको हेरचाह र व्यवहारले ठूलो भूमिका खेल्छ भनिन्छ । तर जब कुनै नर्स नै विरामीको मृत्युको कारक बन्छन् भने स्थिति के होला ? एउटा यस्तो घटना भएको छ, जुन सुन्दैमा त्रसित हुने खालको छ । हामीले मानव हत्याका अनेक […]
मेक्सिको– कुकुरलाई मानिसको सबैभन्दा वफादार साथीको रुपमा लिइन्छ । कुकुरले बेलाबेला मानिसहरुलाई सहयोग गरेर आफ्नो वफादारिता प्रमाणित गर्दै पनि आएको छ । कुकुरले मानिसप्रतिको वफादारिता फेरि प्रमाणित गरेको छ । खासमा एकजनालाई रेलले लिकमा ठक्कर दिएको थियो । घटनामा कुकुरका मालिकको निधन पनि भयो । तर, कुकुरले आफ्नो मालिकको साथ मृत्युपर्यन्त पनि छाडेन । कुकुर […]